Haweeneey ninkeeda kajartay xubinta Taranka kadib markii ay kashakisay. - Caasimada Online
Home Nolosha Haweeneey ninkeeda kajartay xubinta Taranka kadib markii ay kashakisay.
Haweeneey ninkeeda kajartay xubinta Taranka kadib markii ay kashakisay.
Gabar u dhalatay wadanka Yeman jirtana da’da 20-aad,ayaa ninkeeda dishay kadib markii ay kajartay xubin muhiim ah oo jirkiisa kamid ahayd. Gabadhaan ayaa sida ay sheegtay ninkeeda uga shakisay inuu xiriir kale lalahaa dumar kale.
Gabadhaan ayaa waxay ku nooshahay magaalo lagu magacaabo(Al-jowf)oo 200km dhanka bari kaxigta casimada wadankaas ee Sanca,dadka dagan magaaladaan ayaa booliska kusoo war geliyay ineey heleen meydka wiil dhalinyaro ah oo ay ku taalo 7dhaawac oo tooreey ah,kadib baaris dheer waxaa la ogaaday in wiilka dhintay magaciisa uu yahay (Maxamed) kana tirsan dadka deegaanka.
Wiilkan lasoo helay meydkiisa ayaa waxaa jirkiisa ku yiil dhaawacyo tooreey oo kaga yyil xaabadka qoorta iyo meelo kale,sidokale waxaa ka maqnaay xubinta taranka oo ay gabadhan kajartay,gabadhaan oo ay booliska suaalo weydiiyeen ayaa qiratay ineey iyada dishay islamarkaasna uu ahaa saygeeda,gabadhaan ayaa ku dooday inuu lashukaansanyay hawenkale,islamarkaasna uu xiriir hoose lalahaa.
Xaafada Al-jowf waa xaafad ku taala dhanka bari ee sanca,waa xaafad uusan kashaqeynin nidaamka doowladeed ee kajira Yeman,waana xaafad ay maamulaan odoyaasha qabiilka,,sidokale xafadaan waxaa jooga dagalyahano katirsan Al-qaacida iyo xuutiyiinta.
Talada waxaa gooya odoyaasha qabiilka,waxaana hadii baarista hada socota ay dhamaato laguna soo ogaado in wiilkan ay dishay xaaskiisa uu xiriir lalahaa dumarkale waxaa gabadhan lagu abaal marin doonaa ineey samaysay wax fiican xaqna ay ulahayd ineey sidaa sameyso.